Doorka Suxufiga Soomaaliyeed
Dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxey saameyn ku yeesheen dhamaan adeegyadii dalka ka jiray, waxaana adeegyadaas kamid ah adeega warbaahinta. Hadaba waxaan idiin soo gudbineynaa barnaamij aan ugu magac darnay "Doorka Suxufiga Soomaaliyeed" oo aanu ku falan qeyn doono doorkii ay saxaafada Soomaalidu kasoo qaadatay dhibkii dalka ka dhacay iyo doorka uga aadan dib u heshiisiinta.
Barnaamijkan oo noqon doona mid taxane ah ayaa qeybtiisa ugu horeysa waxaa marti inoogu ah labo kamid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Maxamuud Maxamed Afrax: Wuxuu saxaafada Soomaalida ku biiray sanadkii 1962, kana soo shaqeeyay wargeysyadii dalka kasoo bixi jiray laga soo bilaabo xornimadii, Radio Muqdisho iyo weliba wakaaladii wararka Soomaaliyeed ee SONNA. Afrax wuxuu iminka kunool yahay dalka Canada, wuxuuna qoray afar buug oo ku qoran luqada Ingiriisiga. Afrax wuxuu hada wax ku qoraa wargeysyada kasoo baxa dalka Canada qaarkood. Wuxuu sanadihii ay dagaaladu socdeen ku sugnaa Muqdisho halkaasoo uu uga soo warami jiray wakaalada wararka ee REUTERS.
Haaruun Macruuf Xassan: Wuxuu waqtigii ay dagaaladu socdeen ku sugnaa magaalada Muqdisho, wuxuuna usoo warami jiray wakaalada wararka ee ASSOCIATED PRESS. Wuxuu Haaruun usoo shaqeeyay idaacada BBC laanteeda afka Soomaaliga sanadihii 1995-1998, wuxuuna sidoo kale kamid ahaa aasaasayaashii wargeyska Qaran ee Muqdisho kasoo baxa. Haaruun wuxuu iminka kunool yahay magaalada London ee dalka Britain.
Barnaamijkan ayaa u baxaya qaab dood ah, iyadoo uu suxufi kasta dhiibanayo fikradiisa.
Halkan Guji oo dhageyso Dooda dhex martay MM Afrax iyo Haaruun Macruuf oo dhameystiran.
Dooda oo aan soo koobnay ayaa u dhacday sidan:
Su'aal: Mr. Afrah bal wax nooga sheeg bilowgii iyo heerarkii kala duwanaa ee ay saxaafada Soomaalidu soo martay?
Afrah: Saxaafada Soomaalidu heerar kala duwan ayey soo martay, waxaan aniga idiin sheegayaa wixii ka dambeeyay 1960kii markii labada gobol isku darsoomeen oo Jamhuuriyad la sameeyay. Markaasoo saxaafadii waqooyiga kasoo bixi jirtay iyo tii koofurta la mideeyay. Aniga dhicana wargeysyada ayaan aad ula socday, waxaana xiligaas soo bixi jiray wargeys la oran jiray Warsidaha oo uu madax ka ahaan jiray Yuusuf Xassan, kadibna waxaa bedelay wargeys lagu magacaabi jiray Somali News oo Muqdisho kasoo bixi jiray.
Dhamaadkii lixdamaadkii waxaa soo baxay wargeysyo la kala oran jiray Najmatu Oktobar iyo Oktobar Star, markii afsoomaaliga la qoray 1972dii ayaa wargeyskii Najmatu Oktobar lagu bedelay Xidigta Oktobar. Wargeyskii Somali News waxaa lagu bedelay wargeys Heegan la yiraahdo oo afka Ingiriisiga kusoo bixi jiray anigana aan madax ka noqday. Intii aanan madaxda ka noqon wargeyska Heegan, 1962-1970 waxaan ka shaqeyn jiray Radio Muqdisho waxaana soo saari jiray barnaamijyada idaacada, waxaana barnaamijyadii aan raadiyaha kasii dayn jiray kamid ahaa barnaamij la oran jiray MA OGTAHAY?. Waqtigaas runtii dhibaatooyin badan ayaa jiray hadaad ka hadasho waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaabay in laguugu eedeeyo in aad tahay kacaan diid.
Su'aal:Haaruun hadaad isbarbar dhigto saxaafadii dalka ka jirtay xiligii dowlada iyo saxaafada maanta, maxaa kuusoo baxayo?
Haaruun: Walaahi runtii leyska barbar dhigi karo sidaan aniga aaminsanahay, saxaafadaas hore sida Afrax u sheegay waxey u adeegi jirtay dowlada, waxeyna aheyd saxaafad ku hadasha codka dowlada, sidaasoo ay tahay hadana haybad bey laheyd, dadweynuhuna fikrad wanaagsan bey ka qabeen, mana aaney jirin saxaafad ay leeyihiin xisbiyada mucaaradka. Markaa saxaafadii ka dambeysay 1991 lama barbardhigi karo tii dowlada waayo saxaafadii ka dambeysay 1991 waxey noqotay saxaafad xor ah, xornimadaas oo aan xad laheyn, keentayna in ay badankood ka talaabsadeen xeerarkii iyo shuruucdii saxaafada.
Waxaan xusuustaa markii Jabuuti lagu soo dhisay dowlad uu madax ka ahaa Cali Mahdi, waxaa wasaaradii warfaafinta iska diiwaan geliyay in ka badan 70 wargeys oo badankood aaneyba soo bixin. Baahi ba'an ayey dadku u qabeen in ay wax qoraan, waxaana jiray hadafyo kala duwan oo ay lahaayeen, qaarkood ayaa doonayey in ay wax uun qoraan, qaar baa ujeedo ganacsi ka lahaa, qaarbaa ujeedo siyaasadeed ka lahaa. Wargeysyadii is diiwaan geliyay badankood masoo bixin waxaana haatan ka dambeeya labaatan iyo dhowr marka aan Muqdisho ka hadleyno, gaar ahaan koofurta Muqdisho oo ay saxaafadu ku badneyd kana bilaabatay.
Su'aal:Labadiinaba waqtiyadii ay dagaaladu socdeen waxaad kasoo shaqeyseen Muqdisho. Afrah wuxuu u shaqeynayey wakaalada wararka ee REUTERS Haaruuna wuxuu lasoo shaqeeyay idaacadaha BBC laanta afka Soomaaliga iyo wakaalada wararka ee ASSOCIATED PRESS, hadaba Afrax aan adiga kugu hormarnee qatar intee la'eg ayaa Muqdisho ka jirtay waqtigii aad halkaa kasoo warameysay?
Afrah: Khataraha waa iska badnaayeen, dhibaatooyin badan ayaa jiray, markaas ayeyba ugu darneyd, annaga dhinaca Cali Mahdi ayaan jirnay waxaana dhacday in Caydiid weerar kusoo qaaday dhinacaas, hadaba Soomaalidu ma fahmaayaan wax la yiraahdo Press, calaamad lagu garto suxufiyiinta ma jirin, waxaa dhacday in aan ku dhex jirnay labada ciidan ee dagaalamaya dhexdooda aniga iyo Siciid Bakar Muqtaar. Meel Cusbitaalka keysaney agtiisa iyagoo ku dagaalamaya ayaan dhexda uga dhacnay waxaana xabad nooga dhacday darawalkii gaariga noo waday, waxaa markaas gaariga noo kaxeeyay Siciid Bakar waxaana tagnay cusbitaalka oo aaney joogin wax dhaqaatiir ah. Nasiib wanaag darawalka naga dhaawacmay waxey xabada uga dhacday gacanta khatar weyna ma aaney aheyn, marka waan u duubnay gacanta.
Waxaa kaloo jirta mar uu gurigeyga kusoo dhacay madfac, nasiib wanaagna isagoo aan qarxin ayuu derbiga uu kasoo galay derbigiisa ka baxay oo guri kale u gudbay mana qarxin. Waxaa kaloo jirtay laba sawir qaade cadaan ahaa oo aan uwada shaqeyneynay Reuters oo aan aniga madax u ahaa. Waxaan deganeyn Hotel Suxufi waxaana dhacday in ay maqleen rasaas ka dhaceysay meel ku dhow xarunta Caydiid, waxeyna yiraahdeen waan aadeynaa, markaan u sheegay khatarta ay leedahay xaaladana waxey yiraahdeen inta aan nalakaga hormarin ayaan ka gaareynaa, meeshaas ayaana labadoodiiba lagu dilay.
Su'aal:Haaruun isla waqtigaas waxaad ku sugneyd Muqdisho, hadaba maxaad la kulantay oo aad noo sheegi kartaa?
Haaruun: Horta maalintaas 12 July 1993 ee ay dhinteen afarta suxufi ee cadaanka ah, waxaa jiray suxufi shanaad oo Soomaali ah oo maalintaa dhintay balse idaacadaha caalamku aaney sheegin, waxaana la oran jiray Maxamed Cabdi Afgooye. Qatarta ay suxufiyiinta Soomaalidu ku jiraan ma ahan wax la qiyaasi karo, suxufi walba wuu galaa qalad, waxaana dhacda in sharci loo maro sixida khaladkii uu saxafigu galay, balse Soomaaliya qoriga ayaa laguu adeegsanayaa oo waxaa laguu higaadinayaa wixii aad qori laheyd. Caalamka qalinka iyo qoriga qalinka ayaa awood badan balse Soomaaliya qoriga ayaa awood badan.
Dadka maanta Soomaalida hogaamiya waa kuwii usoo shaqeyn jiray dowladii Siyaad Barre waxeyna ogyihiin muhiimada saxaafada, hadaba waxey doonayaan in ay adeegsadaan saxaafada oo ay maamulaan, kartina uma laha in ay dhageystaan fikarada xorta ah ee ay saxaafadu ku hadasho.
Su'aal: Dhowaanahan waxaa batay shabakadaha internetka ee wax lagu qoro hadaba kuwaas malagu tilmaami karaa saxaafad?
Afrah: Waxaad moodaa internetka inuu noqday fowdo aan la kontarooli karin, sumadaha Soomaalidu ay sameysteena waxaad moodaa in ay gobol ama qabiil u hadlaayaan. Wey yar yihiin waxa qaran u hadlaaya. Inkastoo dadkii loo furay forum ama meel ay ku doodaan hadana waxaa badab fowdada. Waxaan maqlay wargeysyada Xamar kasoo baxa xataa waxba ma dhaamaan internetka oo waa fowdo, waayo majiro urur dhowraya ama xakameynaya saxaafada. Waxaa loo baahan yahay sharci loosoo saaro saxaafada Soomaalida, sharcigaasna uu dhowro xuquuqda suxufiga iyo saxaafada.
Su'aal: Mala oran karaa fowdada internetka ka taagan waxaa sababay dowlad la'aanta iyo iyadoo aaney jirin shuruuc iyo qawaaniin hagta suxufiga iyo saxaafada Soomaaliyeed?
Haaruun: Horta internetka in aad u isticmaasho aalad warbaahineed aad bey u wanaagsan tahay, in ay bataan qalabyada warbaahinta aad bey u wanaagsan tahay, sida uu Afrax sheegay qabyaalad lagu eedeeyo suxufiyiinta qaar wey jirtaa balse waxaa amaan leh dadaalka ay wadaan raga da'da yar ee saxaafada ku jira. Qof kasta wax wuu qori karaa balse Suxufigu wuxuu leeyahay qaynuun uu raaco, marka runtii internetka hadii si wanaagsan loo isticmaalo waa aalad warbaahineed oo xoog leh, waxey wataan wararkii, sawiradii, qeybo maqal ah iyo weliba kuwo arag ah, marka waxaa la oran karaa waxey hal meel ku kulmiyeen qeybihii kala duwanaa ee saxaafada sida wargeysyadii, raadiyihii iyo telefishinkii. Hadaba dadka gacanta ku haya shabakadaha internetka waa in ay mas'uuliyad dheeraad ah iska saaraan waxa kusoo baxaya shabakadahooda. Waa in laga hortagaa qaladaadka laga galayo shakhsiyaad ama qabiil iyadoo la adeegsanayo saxaafada. Waxaa wanaagsanaan laheyd in la abuuro urur haga suxufiyiinta Soomaalida oo xakameeya qaladaadka ku jira saxaafada.
Su'aal: Waxaa mararka qaar dhacda in rag suxufiyiin sheeganaya ay minguuriyaan warar ama qoraalo ay dad kale leeyihiin kadibna magacooda ku qortaan iyagoo ku andacoonaya in ay iyagu qoreen, hadaba sidee looga hortagi karaa arinkaas?
Afrah: Arintaas aad sheegtay waa dhibaatada ugu weyn ee na heysato, aniga lafteyda maqaal aniga aan qoray ayuu nin kale iska qaatay, sideedii buu u qaatay magaceyga keliya buu bedelay. Soomaalida keliyana ma ahane xataa magaalada Toronto ayey ka dhacday, qoraal lasoo xaday ayaa lagu soo qoray wargeys kasoo baxa magaaladan, kadibna ninkii lahaa oo Mareykan ah ayaa usoo dacwooday wargeyska. Waa lakala qaataa fikrad iyadoo isla arintii dhinac kale laga eegayo balse waxaa khalad ah oo dambi weyn ah in aad qaadato wax uu qof kale qoray adigoo magacaada kusoo qoraya.
Su'aal: Haaruun sidee dhibkan uu Afrax sheegay looga hortagi karaa, sidee dadka loogu sheegi karaa in ay ka waantoobaan minguurinta qoraalada dadka kale?
Haaruun: Walaahi waa su'aal adag, siduu Afrax sheegayna Soomaalida keliya kuma koobna inkastoo lagu kala badan yahay. Waxaan maqlay in telefishinada Xamar laga daawado isticmaalaan muuqaalo ay leeyihiin telefishino kale, waxaana muuqata in ay adag tahay in telefishin Muqdisho kasoo baxa uu helo sawirada dhacdooyinka caalamka. Waxaa laga yaabaa in aysan weli awoodaas gaarin dhaqaale ahaan ama qalab ahaan, marka intelectual copyright in lagu xadgudbo waa dhibaato weyn. Muhiimada saxaafaduna waa in ay fikrad cusub keento dabadeedna baahiso. Hadaad sawir qof kale isticmaalay ama fikrad qof kale qoray aad qaadato wax aad soo kordhisay malaha, hadaba waa in la helaa fikir cusub oo madax banaan.
Afrah: Haaruun waa runtii waxa la qoraa laba arimood weeye maqaal ama article iyo war ama news. Wararka waa lakala qaataa, sidoo kale sawirada waa lakala qaataa balse qoraaga iyo wakaalada wararka ee uu u shaqeeyo waa in la xusaa. Dhibaatadu waa maqaalada lakala qaadanayo. maqaal uu qof qoray waqti badan ku bixiyay, habeen usoo jeeday in leyska qaato dhibaato weeye. Waxa keliya ee looga bixi karo dhibaatadana waxa weeye in la helo xeerar iyo sharci, runtiina iima muuqato qaab lagu hakin karo dhibkan ilaa la helo dowlad kadibna xeerar iyo sharciyo loo dejiyo saxaafada.
Su'aal: Inta badan suxufiyiinta Soomaalida waxey kala taageeraan hogaamiye-kooxeedyada Soomaalida, hadaba sidee arintaa u aragtaan?
Afrah: Markii uu dalku burburay waxaa soo baxay qabiilo, waxaana sii kala baxay qabiiladii oo jufooyin iwm usii kala baxay, nimankan qabqablayaashana waxey dan ugu jirtaa marxaladan lagu sugan yahay. Waxaad moodaa in ay dad badan raali ka aheyn in dowlad la helo haba ugu horeeyeen siyaasiyiinta. Suxufiyiinta intooda badan waxey la jiraan hogaamiye-kooxeedyada waxeyna u yeelaan sidey rabaan. Hadii aysan qaadan amarka qabqablayaashana nolosha suxufiga ayaa qatar galeysa.
Haaruun: Waxaad is leedahay suxufiyiinta qaarkood wey ku qasban yihiin in ay dhinac taageeraan, waxaan xusuustaa tababar aan ka qeyb galay oo ay kasoo qeyb galeen suxufiyiinta Soomaalida. Hadaba waxaa jirtay in suxufiyiinta Soomaalida la weydiiyay waxyaabaha amaba shuruudaha looga baahan yahay suxufiga Soomaaliyeed, weyna sheegeen waxa suxufi looga baahan yahay, waxaase layaab laheyd in raga qaarkood shuruudihii suxufiga looga baahnaa ku dareen in Suxufigu kasoo jeedo beel hubeysan oo xoog leh. Hadaad dhinac ka fiiriso shardigaas waa mid aan macquul aheyn, isla markaasna hadaad xaqiiqda eegto waa wax maanta ka jira Soomaaliya. Suxufiyiinta Soomaalidu waxey ka shaqeyn karaan oo keliya degaanada ay qabiiladooda ka taliyaan. Waxaa kaloo keena in suxufiga Soomaaliyeed taageero hogaamiye-kooxeed baahi haysata suxufiga. Waa arin laga fiican yahay balse suxufiyiinta qaarkood duruufaha ayaa ku qasba. Waxaa muhiim ah in ay shacabku ogaadaan in saxaafadu u dhaxeyso shacabka iyo dowlada, suxufiguna sharaftiisa ilaashado, warar dhexdhexaad ahna u tebiyo shacabka.
Su'aal: Door intee la'eg bey saxaafadu ka qaadatay hurinta colaadii dalka ka dhacday?
Afrah: Runtii waa jiraan wargeysyo yaryar oo soo bixi jiray, kuwaasoo qori jiray faalooyin ay qolaba qolada kale ku eedeyneysay, mana jirin wargeys ka shaqeynayey sidii leysugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac. Waxaa jiray wargeysyo wanaagsan oo dhexdhexaad ahaa waxaana kamid ahaa wargeyska Qaran iyo kuwo kale oo Muqdisho kasoo bixi jiray. Shacabka intooda badan waxey jecel yihiin wargeysyada buunbuuniya colaada qabiil, xumaantana qora. Sababaha keenay in ay qabiil iyo qabqable buunbuuniyaana waxaa sheegay Haaruun oo ninka wargeyska soo qora aqoonba uma laha saxaafada uu sheeganayo habeen unbuu kusoo toosay maalintii xigtayna wargeys buu soo saaray wuxuuna taageeray qabiilkiisa.
Haaruun: Waxaan usoo joogay in warbixin uu wargeys qoray ay laba beelood isugu dhaceen, waxaa dhacday in nin siyaasi ah qaab kaftan ah u yiri "reer hebel waa sidaas" wargeyskuna warkii buu qoray waxaana dhacday in qabiilkii wax laga sheegay arintii ka carooday dagaalna qaaday. Waxaa kaloo dhacda in marka heshiis ay hogaamiye-kooxeedyadu gaaraan ay qaar tiro yar oo hogaamiye-kooxeedyada ka tirsan ay adeegsadaan wargeysyada iyagoo sheega in ay heshiiskaas kasoo horjeedaan, wargeyskuna uu buunbuuniyo hal hogaamiye-kooxeed oo nabada diidan. Waana qalad ay wargeysyadeenu ku kacaan.
Afrah: Tifaftirayaasha wargeysyada waxaa saaran mas'uuliyad waana in ay si daacad ah u qoraan wararka kusoo baxa wargeyska, baaritaana ku sameeyaan wararka ay qorayaan, mana ahan in wixii la maqlo leyska qoro.
Haaruun:Tifaftirayaasha waxey muhiimada saaraan cinwaan aqristayaasha soo jiidanaya, wax dan ahna kama laha xaqiijinta warka ay qorayaan.
Su'aal: Door caynkee ah ayaa saxaafada Soomaalida uga aadan dib u heshiisiinta Soomaalida?
Haaruun: Wadanka hogaamiye-kooxeedyada malaha, anaga ayaa iska leh, hooyadaa iyo aabahaa ayaa iska leh. Marka aad eegto saxaafada caalamka waxaad arkeysaa in suxufigu qalad kasta oo uu galo aanu marnaba dalkiisa wax xumaan ah ka sheegeyn. Waxaa dhacda in suxufiyiinta Soomaalidu wax walboo xun ka qoraan dalkooda. Saxaafada Soomaalidu ma garanayaan cida ay u waramayaan iyo dadka dhageysta, waxaadna moodaa in suxufiyiinteenu u waramaan sida ajnabigu uga waramaan Soomaaliya, waana khalad oo waxaa loo baahan yahay in dadka gacanta ku haya idaacadaha iyo wargeysyada Soomaaliya ay dareemaan in ay u waramayaan dad Soomaali ah ee aaney u warameyn duni kale, sidaa daraadeed ay waqti badan ku bixiyaan wararka iyo barnaamijyada isu soo dhoweynaya shacabka Soomaaliyeed.
Afrah: Waxa keliya ee aan hadalka Haaruun ku darayo waxa weeye, dadka Soomaaliyeed ee debeda kunool ayaa looga baahan yahay in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka Haaruun sheegay, waxey arkeen qaabka ay u shaqeyso saxaafada caalamka iyo shuruucda iyo qawaaniinta haga saxaafada. Maanta waxaad arkeysaa in isgaarsiinta dunida ugu raqiisan ay ka jirto Soomaaliya, waxaa jira ganacsato Soomaali ah oo debedaha ka tegay idaacadana ka furtay Soomaaliya balse aan weli garaneyn qaabka ay saxaafada u shaqeyn laheyd, waxaana doorkaas looga baahan yahay in ay buuxiyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee debedaha aqoonta ku qaatay ee uu Haaruun kamid yahay, aniga iyo dadka ila midka ah waqtigeenii waa dhamaaday.
Haaruun: Afraxow sidaa lagaagama harayo, howshan waa mid aan adiga iyo dadka kula midka ah ee aabaha u ahaa saxaafada Soomaaliya aaney hureyn in ay wax ka qabtaan.
Su'aal:Majirtaa fariin ama baaq aad u jeedineysaan suxufiyiinta Soomaaliyeed kuwooda debeda ku nool iyo kuwa gudahaba?
Afrah:Hal eray baan leeyahay, wadankii..wadankii u istaaga, qabiilna ha u istaagina, danaha wadanka u istaaga ayaan leeyahay suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Haaruun: Waxaa loo baahan yahay in suxufiga Soomaaliyeed uu naftiisa cadaalada ka bilaabo, beentana ka dheeraado, marka uu suxufigu qof caadil ah oo run lagu yaqaan noqdo ayey bulshadu aamineysaa, isla markaana uu door ku yeelan karaa bulshada uu u waramo.